Global Voices teny Malagasy » Maraoka: tsy nampoizina nandravarava · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 01 Marsa 2010 20:32 GMT 1	 · Mpanoratra Jillian C. York Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Maraoka, Fivavahana, Saripika, Tantara, Voina, Vonjy Voina
Vaovaom-paharavana nitranga tany Maraoka tamin'ny 19 Febroary lasa teo: Nihotsaka nandritra ny fotoam-bavaka isan-joma ny minaret an'ny môske Bab Berdieyinne (fantatra ihany koa amin'ny hoe moske Lalla Khenata bint Bekkar) izy miorina ao amin'ny tanàna Lovan'ny UNESCO  ao Meknès, Maraoka (izay nipetrahako ny 2005-2007). Nolazaina ho 11 ny isan'ny maty tamin'ny voalohany, fa araka ny nampitain'ny  CNN tamin'ny sabotsy manaraka io dia 36 izany sady niampy maratra 71. Nolazaina moa fa noho ny orana nisesy no nampalemy ny fanorenan'ilay minaret ka nahatonga ny fihotsahana.
Nifampizara ny fitantarana tao an-toerana sy ny fiaraha-miory tamin'ny mponin'i Meknès ny mpamaham-bolongana. Manoratra i  MontanaRon, izay nampianatra teny anglisy tao amin'ity tanàna ity :
Noadinoiko ny naneho fiarah-miory tamin'ireo namana Maraokana noho ity voina nahafatesana olona maro ity tamin'ny nihotsahan'ny Mosken'i Bab Berdieyinne . Mivavaka aho mba tsy haninona avokoa ireo olom-pantatro, Insha’Allah.
Ho an'ireo izay tsy nahare moa moa dia nisy voina nitranga tany Meknes, izay niasako nandritra ny herintaona. Tamin'ny fanisana farany moa dia 41 no nindaosin'ny fahafatesana ary maro ny naratra. Mitodika any amin'ireo izay nharam-boina ny foko. Ato ny rohy  ahitana sary nopihako tamin'ny tanàna tranain'i Meknes avy tao wadi, tanàna vaovao izay nipetrahako. Na dia tsy fantatro aza hoe aiza no misy ny Moske Bab Berdieyinne ao amin'ity sary ity, di amatoky aho fa iray amin'ireo voapika ao izany. Ampahafantaro ahy azafady ny misy azy raha misy mahita ao amin'ny sary. Manantitra ny fiaraha-miory sy ny fampiononana amin'ireo izany niharam-boina aho.
Nampitodika ny mpamaky ho amina sary irain'ny moske, tao amin'ny Twitter, ny minisitry ny raharaham-bahiny Bahrainita (sary etsy ambony), sady nivolana hoe :
Anisan'ireo mpamaham-bolongam-baovao Maraokana maro ny Morocco Post izay mahita ity minaret mirodana ity ho avy amina tsy fitandremana. Avy amin'ny fanaovam-pampitahana tamin'ny raharahan-tsy fitandremana alika nitranga tany Angletera sy ity voina ity no nanipazan'ny mpamaham-bolongana teny :
Nanambara ny  Morocco Time fa maromaro ny fitondram-panjakana vahiny no nandefa ny fiaraha-miory tamin'ny vahoaka Maraokana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/03/01/5173/
 Manoratra i : http://montanaron.com/wordpress/2010/02/22/moroccan-mosque/
 nihotsahan'ny Mosken'i Bab Berdieyinne: http://www.huffingtonpost.com/huff-wires/20100220/af-morocco-minaret-collapses/
 Ato ny rohy: http://montanaron.com/Copper/Copper/displayimage.php?album=45&pos=32
 sady nivolana hoe: http://twitter.com/khalidalkhalifa/statuses/9386411455
 no nanipazan'ny mpamaham-bolongana teny: http://www.moroccopost.net/politics/4594-morocco-the-suspect-of-the-meknes-disaster-has-been-named/
 Nanambara ny : http://liosliath.com/blog/2010/02/22/meknes-minaret-offers-of-sympathyassistance/